California Institute of Technology - Isifundo e-USA. Imfundo Bro
California Institute of Technology Yokuxhumana
isifinyezo : Caltech
Wasekelwa : 1891
abafundi (ngu.) : 2500
Ungakhohlwa xoxa California Institute of Technology
Bhalisa at California Institute of Technology
California Institute of Technology uyilungiselelo ezimele ukuthi yasungulwa ngo 1891.
Ukufundisa Imali eCalifornia Institute of Technology kukhona $45,000 (Aprox.).
Caltech, egxile esayense nobunjiniyela, Itholakala e Pasadena, California, cishe 11 miles mpumalanga Los Angeles. ukuphila Social and academic at Caltech kugxile izindlu umfundi ayisishiyagalombili, okuyinto isikole elikuchaza ngokuthi “ozibuse amaqembu ophilayo.” Student izindlu ufake i Caltech isiko bayahlonishwa: sokudla akhonzwa oweta umfundi. freshmen kuphela kudingeka ukuba baphile on campus, kodwa emhlabeni 80 abafundi abangamaphesenti angu ahlale endlini yabo yonke iminyaka emine. I Caltech beaver benezingane eziningi NCAA Division III amaqembu ukuthi ukuncintisana kule Southern California Intercollegiate Conference Athletic. Ebalulekile ekuphileni umfundi Nodumo Code, okuyinto kufuna ukuba “Alikho ilunga lomphakathi Caltech uzathatha ngokungeyikho nguliphi lilunga lomphakathi Caltech.”
Ngaphezu izifundo zayo undergraduate, Caltech unikeza izinhlelo graduate phezulu kwezobunjiniyela, biology, chemistry,isayensi yekhompyutha, umhlaba sciences, mathematics ne-physics. Caltech uhlanganyela imali enkulu yocwaningo, abathola izibonelelo ezikhungweni ezifana ne-NASA, the National Science Foundation kanye noMnyango Wezempilo Human Services, phakathi kwabanye. Caltech igcina isiko oqinile ka pranking ne-Massachusetts Institute of Technology, enye isayensi nobuchwepheshe enyuvesi top-zibalwa. Izinkampani ezifana Intel, Compaq futhi Hotmail abangu eyasungulwa Caltech alumni. Famous umqondisi wamabhayisikobho uFrank Capra iziqu Caltech.
Biology & Engineering Biological
Caltech ososayensi bezinto eziphilayo sisebenze ukuze embule tindlela-indlela yemvelo amashumi ezinkulungwane izingxenye isinyathelo in concert emangqamuzaneni, indlela eziphilayo akhule kusukela amaseli single, indlela ubuchopho ucondza consciousness yayo, imizwelo, futhi oncomekayo amakhono yezamakhompyutha, futhi kwenzekani lapho iyiphi yalezo izinqubo iya nenkinga enkulu.
Chemistry & Ubunjiniyela bamakhemikhali
izinqubo Caltech sika osokhemisi onjiniyela amakhemikhali isifundo nature sika okuyinkimbinkimbi kakhulu esikalini kusukela subatomic kuya macroscopic. abakutholile kuholele ekwakhiweni kwamathuluzi wamavukelambuso, ama-molecule, futhi izinto imithi, amandla ahlanzekile, Ukuvikelwa kwemvelo, futhi nokuningi.
onjiniyela Caltech kanye wasisebenzisa ososayensi usungula Ngokuzayo, ukusebenza ngaphesheya ezihlukahlukene eyala kanye at imingcele eyisisekelo isayensi ubuchwepheshe kokubili ekhulelwa design kusasa.
Kungakhathaliseki ukutadisha izikhathi eziphindwe ka exoplanets, namaminerali Mars, noma ukuzamazama komhlaba Emhlabeni, ososayensi Caltech sika Geological futhi kwamaplanethi usebenzise enamandla Geophysical amathuluzi nezindlela ukuchaza lezi izinhlelo zemvelo lokukwazi futhi baqonde esidlule, samanje, futhi ikusasa lazo zonke amaplanethi yesimiso sethu sonozungezilanga sika.
Lesi sigaba kuletha ndawonye ubuhlakani abangefani, kusukela mlando zefilosofi ukuze osomnotho ososayensi bezinzwa, ukuze uhlole umlando wesintu kanye nobuqambi, ukubheka izinqumo esizenzayo nendlela sibenza, futhi ahlinzeke nokuqonda elisha ezingqalathini kanjani thina ukuxhumana futhi baqonde izwe lethu.
zesayensi Caltech sika, zezibalo, futhi izazi zezinkanyezi ukuhlola umkhathi abavela kuzo zonke yayihluke futhi ngaso sonke izikali. Lesi sigaba kuletha ndawonye experimentalists futhi bempilo, ososayensi isicelo eziyisisekelo, futhi ubakhuthaza lokumba isikhathi nendawo, kusukela namhlanje emuva Big Bang, kusukela yonke kuya subatomic.
Caltech okwaqala njengempi yenkolo esikoleni sokufundela eyasungulwa e Pasadena ngo 1891 kasomabhizinisi zendawo sezombusazwe Amose G. Throop. Lesi sikole wayaziwa ngokulandelana njengoba Throop University, Throop Polytechnic Institute (neSikole Sokuqeqeshelwa Manual), futhiThroop College of Technology, ngaphambi ezuza igama layo lamanje e 1920. Lesi sikole sokufundela lahlakazwa kanye nohlelo wokulungiselela lwaqhekeka off ukwakha ezimele Polytechnic School in 1907.
Ngesikhathi lapho ucwaningo lwesayensi e-United States kwaba isencane isakhasa, George Ellery Hale, kamuva isazi sezinkanyezi solar kusuka theUniversity of Chicago, wasungula iNtaba Wilson Observatory e 1904. Yena wajoyina ibhodi Throop sika-trustees e 1907, futhi ngokushesha waqala ekulikhanyiseni nayo yonke Pasadena ube uya khona ezinkulu zesayensi kanye namasiko. Yena izakhi ukuqokwa kaJakobe A. B. Scherer, isazi tetemibhalo untutored in isayensi kodwa okhaliphile umphathi sikhwama ngumfuyi, ukuze ihhovisi likamengameli Throop ngo 1908. Scherer wathonyelwa usomabhizinisi umhlalaphansi trustee Charles W. Gates ukuba nginikele $25,000 ngenzalo imali yokwakha Gates Laboratory, isakhiwo isayensi lokuqala ezikoleni.
Ngaphansi kokuhola Hale, Noyes futhi Millikan (Ngosizo lomoya umnotho iyachuma of Southern California), Caltech idlondlobala kazwelonke 1920 futhi wagxila ekuthuthukiseni Roosevelt sika “Hundredth Man”. On November 29, 1921, the abaphatheli yathi ukuba kube inqubomgomo express Institute ukuba aphishekele ucwaningo lwesayensi kubaluleke kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo “ukuba aqhubeke ebheka ukuqhuba izifundo obupheleleko kwezobunjiniyela nesayense okuhlanzekile, besekela umsebenzi lezi zifundo on imfundo luqine sciences eyisisekelo yezibalo, physics, kanye ne-chemistry; ukunabisa futhi ekwandiseni lwezifundo by isamba liberal lusetshenziswe ezifundweni ezifana English, umlando, nakwezomnotho; futhi vitalizing wonke umsebenzi we-Institute by the ukumnika ngesilinganiso elinomusa umoya ucwaningo.” Ngo 1923, Millikan waklonyeliswa uMklomelo KaNobel in Physics. Ngo 1925, isikole selisungule umnyango yokwakheka komhlaba baqasha UWilliam Bennett Munro, owayengusihlalo we-division of History, Uhulumeni, futhi Economics eHarvard University, ukudala division of Humanities kanye nesayensi yezenhlalo at Caltech. Ngo 1928, a division of biology yasungulwa ngaphansi kobuholi buka Thomas Hunt Morgan, the isazi sezinto eziphilayo ovelele e-United States ngaleso sikhathi, futhi owathola indima zezakhi zofuzo kanye chromosome in ufuzo. Ngo 1930, Kerckhoff Marine Laboratory yasungulwa ngo Corona del Mar ngaphansi kokunakekela Professor George MacGinitie. Ngo 1926, isikole ophothule yamabhanoyi wadalwa, eyagcina bakhangwa Theodore von Kármán. kamuva Kármán kwasiza ukudala Laboratory Jet Propulsion, futhi wafeza ebalulekile ingxenye ekumiseni Caltech njengomunye wezinye izikhungo emhlabeni analo rocket isayensi. Ngo 1928, Ukwakhiwa kwehlelo Palomar Observatory waqala.
Millikan wakhonza njengombonisi “Usihlalo loMkhandlu oPhethe” (ngempumelelo umongameli Caltech sika) kusukela 1921 ukuze 1945, futhi ithonya lakhe kwaba kukhulu ukuthi Institute ngezikhathi ezithile kubhekiselwa kuye ngokuthi “School Millikan sika.” Millikan waqala-izazi ngokuvakashela Uhlelo ngokushesha ngemva kokujoyina Caltech. Ososayensi abamukela isimemo sakhe zihlanganisa izinkanyiso ezifana uPawulu Dirac, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Hendrik Lorentz andNiels Bohr. Albert Einstein befika campus Caltech ngokokuqala ngqá ngo 1931 ukuze bathuthukise kakhulu inkolelo yakhe yokuziphendukela General Relativity, futhi wabuyela Caltech kamuva njengoba uprofesa nokuhambela 1932 futhi 1933.
Phakathi neMpi Yezwe II, Caltech wayengomunye kwabangu 131 amakolishi kanye amanyuvesi kuzwelonke ukuthi waba nengxenye V-12 Navy College Training Programwhich wanikela abafundi endleleni ikhomishana Navy. The United States Navy futhi balondoloza wamabutho asolwandle ukuqeqeshwa esikoleni for engineering aeronautical, Abahloli isakhamuzi ordnance nezinto ezibonakalayo asolwandle, futhi isikhulu umxhumanisi ukuze iNational Defense Research Committee on campus.
In the 1950s-1970, Caltech Bekumumuzi Murray Gell-Mann noRichard Feynman, umsebenzi ogama kwaba central to ukusungulwa kwe-Standard Model of kuyizinhlayiyana physics. Feynman lalivame eyaziwa ngaphandle umphakathi physics njengoba umfundisi kungemalengiso futsi colorful, uhlamvu unconventional.
Phakathi Lee A. ngokuphathelene namalungelo okusebenzisa umhlaba DuBridge sika njengoba umongameli Caltech sika (1946-1969), ubuhlakani Caltech kabili, campus liye laphindeka kathathu ngobukhulu. DuBridge, ngokungafani ababengaphambi kwakhe, usamukele ngezimali federal isayensi. New ucwaningo amasimu bachuma, kuhlanganise amakhemikhali biology, isayensi amaplanethi,isayensi yokuma kwezinto ezisemkhathini zenuzi, futhi Geochemistry. A-200 ye-intshi telescope lanikezelwa ngo eseduze Palomar Intaba 1948 futhi wahlala telescope wezwe elinamandla kunawo wonke-optical iminyaka engaphezu engamashumi amane.
Caltech yakhoselisa undergraduates female ngesikhathi u-Harold Brown in 1970, futhi lakhiwa 14% the class ekungeneni. Encane undergraduates female belilokhu ziyanda kusukela ngaleso sikhathi.
Caltech undergraduates zinomlando wokubangela bebengawunaki ukuze kwezombusazwe ukuthi ikhona ehleliwe umfundi umbhikisho kuphela ngo-January 1968 ngaphandle Burbank studios of NBC, eziphendula okuthi NBC kwaba ukukhansela Star Trek. Ngo 1973, abafundi Dabney House waphikisana ukuvakashelwa kamongameli nge uphawu umtapo bethwele ibinzana elula “Impeach Nixon”. Ngesonto elilandelayo, Ross McCollum, weNational Oil Company, wabhala incwadi ayibhalela Dabney House esho nokuthi ukukhanya yezenzo zabo yena babenqume ukungahambi nginikele esigidini esisodwa zamaRandi Caltech. The Dabney umndeni, nenhlalakahle Republican, uluphikile Dabney House ngemva kokuzwa we Prank.
Kusukela 2000, the Einstein Papers Project iye sise Caltech. Le phrojekthi yasungulwa ngo 1986 ukuba babuthane, ukulondoloza, ukuhumusha, futhi lishicilele amaphepha akhethiwe estate kwezincwadi Albert Einstein nakwamanye amaqoqo.
In ukuwa 2008, ikilasi freshman kwaba 42% female, umbhalo undergraduate ukubhalwa Caltech sika. Ngawo lowo nyaka, Institute yenza owadonsa iminyaka eyisithupha fund-ukhulisa. Lo mkhankaso yaphakamisa ezingaphezu kuka $1.4 billion mayelana 16,000 abanikelayo. Cishe isigamu izimali bangena ukusekela amahlelo Caltech kanye namaphrojekthi.
Ngo 2010, Caltech, ngokubambisana Lawrence Berkeley National Laboratory futhi ephethwe uProfesa Nathan Lewis, wasungula DOEEnergy Innovation Hub okuhloswe ngazo ukuthuthukisa iindlela izinguquko ukukhiqiza zokubasa ezimbiwa ngokuqondile elangeni. Lokhu hub, Ukuhlala Ngokuhlanganyela Kwezindlu Zombili Center for Artificial photosynthesis, uzothola kuze kufinyelele $122 million ngo ngezimali federal engaphezu kwemihlanu iminyaka.
Kusukela 2012, Caltech waqala ukunikela amakilasi ngokusebenzisa MOOCs ngaphansi Coursera, nokusuka 2013, edX.
Jean-Lou Chameau, umongameli lwesishiyagalombili, umemezele ngoFebhuwari 19, 2013, nokuthi wayeyozalelwa uyehla ukwamukela Esengamele Ulwazi Ehhovisi likaMongameli King Abdullah University of Science and Technology. Thomas F. Rosenbaum kwamenyezelwa abe umongameli wesishiyagalolunye Caltech on October 24, 2013, futhi term yakhe waqala ngoJulayi 1, 2014.
Uyafuna xoxa California Institute of Technology ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
California Institute of Technology kumephu
Izithombe: California Institute of Technology Facebook ezisemthethweni
California Institute of Technology Izibuyekezo
Joyina ukuze kuxoxwe of California Institute of Technology.